तेल ट्यांकरमा आगलागी हुँदा कम्तीमा १२३ जनाको मृत्यु – Setosurya
पाकिस्तानमा तेल ट्यांकरमा आगलागी हुँदा कम्तीमा १२३ जनाको मृत्यु भएको छ ।
पाकिस्तानको एक सरकारी टेलिभिजनलाई उद्धृत गर्दै बीबीसीले जनाएअनुसार बहावपुर सहरमा तेल ट्यांकर पल्टिएर भएको आगलागीमा १२३ जनाको मृत्यु भएको हो । दुर्घटनामा ७५ जना भन्दा बढी घाइते भएका छन् । घाइतेहरुको सहरकै भिक्टोरिया अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ ।
पाकिस्तानी अनलाइन डनका अनुसार ट्यांकरबाट चुहिएको तेल जम्मा गर्न झुम्मिएका स्थानीयहरु आगलागीमा परेका छन् । ट्यांकरबाट तेल चुहिएको खबरपछि ठूलो संख्यामा महिला र बालबालिका तेल जम्मा गर्न गर्न पुगेका थिए । दुर्घटनामा ६ वटा कार र १२ वटा मोटरसाइकल जलेका छन् ।
आगलागीमा मृत्यु भएकाहरुको अनुहार चिन्न सकिंदैन । उनीहरुको डीएनए परीक्षणको तयारी भइरहेको बीबीसीले जनाएको छ ।
भारु नोटमाथि प्रतिबन्ध लाग्दा समस्या
भारतको श्रीनगर एयरपोर्टमा आतंककारी हमला, सबै उडान रद्ध
‘मितिनी’ र ‘सोल्टी’ चीनतिर लागेपछि…….
भारतीय र श्रीलंकाभन्दा नेपाली बढी खुसी, वर्ल्ड ह्याप्पीनेस रिपोर्टमा नर्बे नम्बर वान नेपाल ९९औं नम्बरमा
आरआर क्याम्पसमा अनेरास्ववियूको प्यानलै विजयी (सूचिसहित)
सांसद पदम गिरीले भने बैंकहरुको सिण्डिकेटले उद्योगी, ब्यापारी सुकुम्बासी बनाए……
यस्तो छ ओली र प्रचण्डको संयुक्त चुनावी कार्यक्रम ! हेर्नुहोस् कहाँ कहिले सम्बोधन गर्दैछन् ?
यी हुन् शिक्षा मन्त्रालयले छानेका मुलुककै १२ उत्कृष्ट विद्यालय (नामसहित)